अनुहार नै सार्वजनिक नभएको करिना कपुरको दोस्रो छोराको नाममा किन बन्यो ट्रोल? – Jagaran Nepal
अनुहार नै सार्वजनिक नभएको करिना कपुरको दोस्रो छोराको नाममा किन बन्यो ट्रोल?
भारतीय अभिनेत्री करिना कपुर र अभिनेता सैफ अली खानले केही समयअघि आफ्नो दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिएका छन्। यस पटक पनि छोराका आमा बुबा बनेका उनीहरुले अहिलेसम्म बच्चाको अनुहार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर उनीहरुले आफ्नो छोराको नाम ‘जेह’ भनेर सम्बोधन गरिरहेका छन्।
करिनाले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो नयाँ किताब ‘करिना कपुर खानको प्रेग्नेन्सी बाइबल’मा भने दोस्रो छोराको पूरा नामसहित फोटो पनि राखेको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। जेहको पूरा नाम जहाँगीर अली खान हो र उनको फोटो करिनाको किताबको अन्तिम पानामा राखिएको छ। जेहको पूरा नाम सार्वजनिक भएलगतै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बन्न थालेको छ।
कयौंले मिम बनाएर सैफअली खान र करिनाको नाम रोजाइलाई लिएर मजाक बनाइरहेका छन्। उनीहरु जेहको नाम भारतको चौथो मुगल राजा जेहांगीरको नामबाट राखिएको विश्वास गर्छन्। सैफ र करिनाले आफ्नो पहिलो सन्तान तैमुरको नाम पनि टर्कीका राजा तैमुरबाट प्रभावित भएर राखेको अनुमान गरिएको थियो। यसअघि पनि धेरैले तैमुरको नामलाई लिएर ट्रोल बनाएका थिए।
सामाजिक सञ्जालमा यी दुई बालकका नामको ट्रोल बनिरहँदा सैफअलीकी बहिनी साबा अली खानले यसबारे बोलेकी छिन्। उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा जेहको नामबारे बनेको समाचारको स्क्रिनसट राखेर ‘जेह होस् वा जान, नाममा के राखेको छ? माया गर, बाँच र जे भइरहेको छ हुन देउ। बच्चाहरु भगवानको आर्शीवाद हुन्’ लेखेकी छिन्। आफ्नो किताबको लन्चमा भने करिनाले जेहलाई जेह अली खान नामबाटै चिनाएकी थिइन्। सुरुमा जेहको नाम करिनाका बुबा रन्धीर कपुरले अन्तर्वार्ता क्रममा खुलासा गरेका थिए।
जेहलाई जन्म दिनुअघि करिनाले नेहा धुपियाँको कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा आफ्नो दोस्रो सन्तानको नाम के राख्ने भनेर निर्णय नलिएको र तैमुरको नाम सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा भएको वि’वादजस्तो फेरि अर्काे ल’फ’डामा पर्न नचाहेको बताएकी थिइन्। गत वर्ष भारतीय पत्रकार वर्खा दत्तसँगको अन्तर्वार्तामा करिनाले एक प्रसिद्ध व्यक्तित्वले तैमुरको जन्म भएको केही घण्टामा नै उनको नाममाथि प्रश्न उठाएको बताएकी थिइन्।
‘मैले तैमुरलाई जन्म दिएको केही घण्टापछि एकजना प्रसिद्ध व्यक्ति मलाई र मेरो छोरालाई भेट्न आएका थिए, तर आउने बित्तिकै उनले हामीलाई बधाइ दिनुपर्ने ठाँउमा उल्टै तैमुरको नाममाथि प्रश्न उठाएका थिए। मैले तैमुरलाई जन्म दिएको आठ घण्टा पनि भएको थिएन र ती व्यक्तिको कुरा सुनेर म रुन थालेँ,’ करिनाले भनेकी थिइन्, ‘त्यहीबेला देखि मैले आफ्नो छोरामाथि उठ्ने प्रश्नका लागि आवाज उठाउने कदम लिएकी हुँ। जबसम्म म, मेरो छोरा र परिवार खुसी छ, अरुले के भन्छ र कसले के ट्रोल बनाउछ भन्ने कुरामा म वास्ता गर्दिन।’